Qaramada Midoobay waxaa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay kormeerto dekedda Hodeydah ee dalka Yemen - BBC News Somali
Qaramada Midoobay waxaa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay kormeerto dekedda Hodeydah ee dalka Yemen
Image caption Dekedda Hudeydah
Qaramada Midoobay waxaa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay kormeerto dekedda Hodeydah ee dalka Yemen, si halkaasi looga soo dejiyo gargaar la doonayo in la gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan dalkaasi. Hadalkan ayaa waxaa lagaga dhawaaqay magaalada Geneva.
Magaaladan ayaa waxaa ku dagaalamaya fallaagada Xuutiyiinta iyo xulafada uu hogaamiyo Sacuudiga, kaa oo iminka sii xoogeystay.
Hay`adaha gargaarka ee QM ayaa sidoo kale sheegtay in 14 milyan oo dadka Yemen ah ay qarka u saran yihiin macluul, sida keliya ee gargaar cunto si degdeg ah loogu gaarsiin karo dadkaasi na ay tahay in loo mariyo Xudeyda.
Hasayeshee dekadda ayaa waxaa xiray isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo, iyagoo ka jawaabaya weerarrada Xuutiyiinta, waxaana bisha soo socota la rajeynayo inay dhacaan wadahadallo nabadeed oo u dhaxeeya labada dhinac.
Ergeyga Qaramaad Midoobay u qaabilsan dalkaasi Martin Griffiths ayaa waxaa uu gaaray magaalada Xudeyda, halkaa oo uu wadahadal kula leeyahay xuutiyiinta oo gacanta ku haya magaalada.
Imaanshihiisa ayaa yara hakiyay dagaalka. Qaramad Midoobay ayaa rajeyneysa in soo jeedinteeda ku aaddan inay kormeere ka noqdaan dekadda ay yareyso xiisadda ka taagan dalka Yemen.